काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राति ११ बजेर ३६ मिनेट जाँदा एक ट्वीट गरेर उनले संविधान संशोधनको विषय उठाएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ओली निकटका नेता बाँस्कोटाले कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेचाँही खुलाएका छैनन् । उनले यसबारेको मत भने समयक्रमसँगै राख्ने बताएका छन् । ‘संविधान त संशोधन गर्नैपर्छ पर्छ पर्छ तर, के–के मा ? मेरा केही मत छन्, जसमा अरु सहमत नभए पनि समयक्रममा राख्दै जानेछु । हेरौँ के हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला बाँस्कोटाले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका हुन् ।
७० करोड कमिसन काण्डमा नाम जोडिएपछि ओली क्याबिनेटबाट बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । सो अडियो प्रकरणको बारेमा प्रभावकारी तरिकाले छानविन भइरहेको छैन । बाँस्कोटाले सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उनको 'वाक' शैलीको आलोचना हुने गरेको थियो ।
संबिधान त शंसाेधन गर्नै पर्छ पर्छ पर्छ तर के के मा ?मेरा केहि मत छन,जस्मा अरु सहमत नभए पनि समयक्रममा राख्दै जानेछु।हेराै के हुन्छ?
— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) January 18, 2021